एमाले छाड्ने प्रदेश-१ का १० सांसदकाे सामुहिक निर्णय-भोलि निर्वाचन आयोग जाने ! – Nepal Online Khabar
एमाले छाड्ने प्रदेश-१ का १० सांसदकाे सामुहिक निर्णय-भोलि निर्वाचन आयोग जाने !
भाद्र १५, २०७८ मंगलबार 342
काठमाडौं : प्रदेश–१ का १० सांसदले नेकपा (एमाले) छाड्ने भएका छन् । विराटनगरको एक होटेलमा चार दिनसम्म छलफल गरी एमाले त्यागेर माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा जाने सामुहिक निर्णय गरेका हुन् ।
एमाले त्यागेर एकीकृत समाजवादीमा जाने १० जना सांसदहरुमा राजेन्द्र राई, राजन राई, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्री रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्माङ, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापा रहेका छन् ।
उनीहरूले चार दिनसम्म विराटनगरको बिग होटेलमा छलफल गरेका थिए । प्रदेश सांसदहरू राजेन्द्र, गणेश र कृष्णकुमारी एमाले केन्द्रीय सदस्य नै हुन् ।होटेलमा बस्दा एकीकृृत समाजवादीमाथि सांसदलाई होटलमा राखेर
बन्दक बनाएको अरोप लागेको थियो । समाजवादीमा लागेका १० सासदहरुले सोमबार साँझदेखि बिग होटल छाडेका छन्् । उनी गत शुक्रबारबाट उक्त होटेलमा बस्दै आएका थिए ।
समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईका अनुसार उनीहरुले होटल छाडेसँगै विराटनगरनै छाडेका छन् । आफू इटहरीमा रहेको र केही अन्य केही सांसदहरु धरानतिर गएको नेता राईले बताउनुभयो ।
आफूहरूले समाजवादी दल रोजेको पत्र भोलि (बुधबार) निर्वाचन आयोगलाई दिने तयारी गरेका नेता राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि प्रदेश निर्वाचन आयोगमा मात्रै सबैको भेट हुने हुन्छ ।
होटलमा बस्दा विभिन्न कुरा सुनेपछि हामीले होटल छाडेका हौँ ।’मगलबार नै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर गर्ने रणनीतिअनुसार उनीहरु होटलमा बसेका थिए । प्रदेश सरकारले मंगलबार झापा, मोरङ र सुनसरीमा रथ तान्न सार्वजनिक विदा दिएपछि उनीहरु बुधबार मात्रै आयोगमा जाने भएका हुन् ।
Prevबाढीले पाइप बगाउँदा पानीको हा’हाकार !
Nextहाम्रो देशमा फेरि कुनै आ’क्रमण हुनु हुँदैन : तालिवानी नेता !
Dazzling Filipino Women
आज साउन ३० गते शनिबार ,कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नु-होस् राशिफल !
लामो समयदेखि बन्द रहेको विद्यालयहरु सञ्चालनको तयारी !